Global Voices teny Malagasy · 9 Jona 2019
09 Jona 2019
Tantara tamin'ny 09 Jona 2019
Fijoroana vavolombelona avy amin'ireo mpamaky: Ny antony anohanako ny Global Voices
Mediam-bahoaka09 Jona 2019
...azoko antoka ny hoe ny Global Voices dia miezaka ny manome fomba famaky iray hafa momba ity tontolo ity miaraka amin'ireo tatitra erantany. Afaka ny hitondra fiovàna izany, na tsia koa. Saingy mendrika ny ho andramana ary tiako ny hanohana an'izany.
Azia Atsinanana09 Jona 2019
Dika09 Jona 2019
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Desambra 2015) Arahaba ry, namana GV'ers! Ialàna tsiny ny fahataràn'ny gazetintsika tamin'ìty herinandro ity. Mbola niady tamin'ny hatsiaka aho ary nandany ireo andro vitsivitsy toy ity hitanareo amin'ny sary ity: Ankehitriny satria efa miverina tsikelikely ny hery sy tanjako, ndeha isika hiresaka momba ny …...
Torohevitra ho an'ny fanoratana, volana Janoary: Ndeha hanambatra ny tontolontsika isika
fandikàna-gazety09 Jona 2019
Ny lahatsoratra ifandrimbonan'ny faritra no ifantohana amin'ny volana Janoary.
Tia lisitra aho. Ary ity iray ity dia notsimponina avy amin'ny iray amin'ireo torohevitra tsara indrindra novakiako hatramin'izay momba ny asa fanoratana .
Drop-in Center: Ahoana no tokony ho fomba fiasan'ny foibe fanarenana
Vao haingana i Pavel Kutsev, mpitarika ny Drop-in Center, fikambanana tsy mitady tombontsoa ara-bola miezaka mamaha ny olan'ny olona miaina amin'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina no nizara ny heviny momba ny fahombiazan'ny asa eny amin'ny toerana fanarenana ny olona miankin-doha amin'ny zava-mahadomelina.
Antsafa09 Jona 2019
Odian'ny Tandrefana tsy hita ny fonjabe ankalamanjana ihazonana ireo tanora ao Etiopia?
Afrika Mainty09 Jona 2019
Mbola manohy mafy mamely ny governemantan'i Praiminisitra Meles Zenawi, mpanao didy jadona mpanao famoretana ireo tontolon'ny bilaogy Etiopiana. Samy nanambara ny tatitra miavaka avy ao amin'ny Channel 4 mitondra ny lohateny hoe: "Ny fialan'i Etiopia aina", izay efa azo jerena amin'ny aterineto i Meskel Square sy Nazret.com.